Koontada Barca oo la dhacay laguna qoray inay la saxiixatay Di Maria. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Koontada Barca oo la dhacay laguna qoray inay la saxiixatay Di Maria.
Koontada Barca oo la dhacay laguna qoray inay la saxiixatay Di Maria.
Muqdisho – Kooxda Catalan ayaa la jabsaday mid kamid ah baraheeda bulshada gaar ahaan Twitter-ka, dadkii jabsaday ayaana si barabagaando ah ugu soo qoray heshiis aysan kooxdu gelin.
Twitter-ka Barcelona ayaa la jabsaday saacadihii hore ee maanta oo Arbaco ah, waxaana lagu soo qoray in kooxdu ay lasoo wareegtay laacibka kooxda PSG, Di Maria.
Naadiga Barcelona waxa ay had iyo jeer indha ku heysaa in ay ku dhawaaqdo badalka Neymar oo ku biiray Paris Saint-Germain, in kasta oo la aaminsan yahay in Blaugrana ay ku fashilantay doonista laacibka kooxda Liverpool ee Coutinho.
Taageerayaasha kooxda oo aan ka war qabin in la jabsaday mareegta Twitter –ka ee kooxda ayey arintani la noqotay filanwaa’ iyo mid aan macquul aheyn, maadaama kooxdu aysan ku tala-jirin Di Maria isla markaana saxaafaddu aysan tabin xiisaha Barcelona oo ku aadan Xiddigan reer Argantina.
“Ku soo dhawow Angel Di Maria naadiga Barcelona,” ayaa lagu soo qoray Twitter –kii kooxda ee la jabsaday.
In kasta oo Barcelona ay xalisay saacado kadib haddana taageerayaasha ayaa u muuqda kuwo ka fal-celiyay qaabka liita ee kooxdu ay u gashay suuqa xagaagan maadaama ay lumiyeen Neymar oo kamid ahaa haldoorka kooxda isla markaana aysan ciyaaryahan badalkiisa ah wali lasoo saxiixan.
“Akoonkeenna ayaa la jabsaday, waxaan ka shaqeyneynaa inaan xallino dhibaatada sida ugu dhakhsiyaha badan,” ayay soo qortay Barcelona.
“Waad ku mahadsan tihiin sabirkiina,” ayaana lagu sii daray.
MyMine, oo ah shirkad Sucuudi ah oo sidoo kale jabisay akoonka Facebook ee CNN, Twitter-ka, shabakadda Netflix, Marvel iyo akoonka madaxa ugu sarreeya Facebook, Mark Zuckerberg ayaa la sheegay in ay ka danbeysay falkan ka dhanka ah Barcelona.
Previous: Liverpool oo aqbashay heshiis ay Madrid kaga saxiixanayso Mateo Kovacic.
Next: Alexis Sanchez oo kusoo laaban doona safka kooxda Arsenal kulanka Liverpool.